Ratsy Zodiaka Sinoa | Taonan'ny rat | Ny dikan'ny Zodiaka Sinoa - Famantarana Zodiac
Taonan'ny rat: ny toetran'ny Ratsy Zodiaka Sinoa, ny toetranao ary ny toetrany
Toetran-dahatsoratra Zodiac Shinoa, toetrany ary toetrany
Miasa mafy ary manam-bola, ny lazan'ilay orinasa Zodiac Rat Rat dia malaza any Shina!
Ireo mpivezivezy haingana sy mpandinika izay teraka tamin'ny Year of the Rat dia afaka mamintina toe-javatra iray ary manao zavatra mifanaraka amin'izany alohan'ny taona hafa.
Amin'izany dia ny voalavo angamba no tandindona sinoa mahomby indrindra amin'ny fahombiazana sy harena.
Lisitry ny atiny Zodiac Ratsy Sinoa
Karazan-totozy zodiaka sinoa 5
Ankizy Ratsy Sinoa
Ity biby sinoa ity matetika dia olona ara-tsosialy manana toetra manintona. Ny Ratsy Zodiac Shinoa dia mifampiresaka amin'ny fomba marina sy mahitsy.
Manamboatra mpitsongo tena tsara, ny Ratsy Sinoa dia saika mahita fahitana amin'ny tara-pahazavana amin'ny fahaizan'izy ireo mahita antsipirihany na dia olona tsy mahay manavaka aza dia tsy tratrany.
Ireo teraka tamin'ny Year of the Rat dia toa nanana fahatsiarovan-tena bebe kokoa satria mikasika ny loza. Noho izany, manamora ny fahazoan'ity zodiac sign ity ny loza amin'ny raharaham-barotra, fifandraisana, ary ny fiainana amin'ny ankapobeny. Ny voalavo koa dia manana fahatsiarovana mahatalanjona.
Na dia mahay mitandrina ny tsiambaratelon'ny tompony aza ny Ratsy Sinoa dia mety tsy ho voaro ny hafa. Na dia olona marina aza izy ireo, dia tsy manana ahiahy momba ny fampiasana ny fahalemena na lesoka hafa amin'ny tombony ho azy manokana ny Rats ary mirona hanangona izany karazam-baovao izany mora foana izy ireo satria mpifosafosa tsy mampino izay nibby-nose foana amin'ny orinasan'olon-kafa.
Mora tezitra izy ireo, atosiky ny angovo mitebiteby. Ny raty dia mety ho tery ary ny fianjeran'izy ireo lehibe indrindra dia mety hoe matsiravina be izy ireo; mirona mafy maniry be loatra tsy ho ela.
Ratsy Zodiaka Sinoa sy ireo singa dimy
Ny tsirairay amin'ireo Ny biby amin'ny taom-baovao sinoa 12 dia manana singa voafaritra tsara izay misy fiatraikany amin'ny toetrany fototra. Ankoatry ny, ny singa an'ny taona nahaterahan'ny olona dia fitaomana faharoa amin'ny maha-izy azy ireo, afaka ary iza izy ireo, sns.
Mikorisa ambany mba hahitanao ny taona nahaterahanao. Ity dia hilaza aminao hoe 'karazana' inona amin'ny Rat Rat sinoa ianao ary hanampy anao hianatra bebe kokoa momba ny fiantraikan'ny hery mitambatra amin'ny singa raikitra sy faharoa amin'ny fiainanao.
lehilahy capricorn sy vehivavy sagittarius manao firaisana
10 feb 1912 - 5 feb 1913
Mikatsaka hatrany ny hampandroso ny tenany ny fifantohan'ny Rat Rat amin'ny rano dia ny fampianarana sy ny asa. Fomban-drazana, mpandala ny nentin-drazana, manao kajy (amin'ny fomba tsara sy ratsy) ary amin'ireo mpampita hafatra mahatahotra.
Ireo teraka tao amin'ny The Year of the Water Rat dia nentin-drazana sy mpandala ny nentin-drazana. Toa mifanohitra amin'ireo toetra amam-panahin'izy ireo ireo, io biby sinoa io koa dia anisan'ny mahira-tsaina sy manisa indrindra ny famantarana ny zodiaka sinoa rehetra.
Energetika, mpitsangatsangana ary lalitra eo akaikin'ny fipetrahan'ny patalohan'izy ireo ny Fire Rat dia feno fo, miroborobo amin'ny fifaninanana, mitady am-pahavitrihana ny fotoana hanavotana ny olona sy ny biby na hanao zavatra heverina ho be herim-po.
Ireo teraka tamin'ny The Year of the Fire Rat dia malala-tanana amin'ny faran'izay mahery. Ary, satria hanaraka hatrany ny fony any an-dohany foana izy ireo, ny Fire Rat dia tokony hitandrina amin'ny fandaniana tafahoatra ny tenany ara-batana, ara-tsaina ary ara-pientanam-po. Na eo aza izany, ny toerana tena tadiavin'ny Fire Ray hanome izany rehetra izany dia eo amin'ny ara-bola ka zava-dehibe ny fiheveran'izy ireo manokana ny filany manokana raha ny vola sy ny loharanom-bola hafa.
Fientanam-po, idealista ary tantaram-pitiavana ny Rat Rat dia mpamatsy vola lehibe izay tsy ho sadaikatra. Ny totozy metaly dia mpanao fanatanjahan-tena ary tia ny ho eo amin'ireo mpivezivezy sy mpihorohoro an'izao tontolo izao.
Ireo teraka tamin'ny The Year of the Metal Rat dia mety somary hedonista. Tian'izy ireo ny ho tia fa ny tena 'hevitra' ny fitiavana no mahasarika azy ireo mihoatra ny hoe tena ao anaty fifandraisana.
5 feb 1924 - 24 Jan 1925
Mandroso, matoky tena be, misy fotokevitra sy azo ampiharina, ny Wood Rat dia manana fahaizana hafahafa hahafantatra hoe inona no tena tadiavin'izy ireo ary koa ny fomba hahazoana izany.
Wood ao amin'ny tabilao misy azy ireo dia mahatonga ireo teraka tao amin'ny The Year of the Wood Rat Rat ho mpandinika miandalana satria toy ny hazo maniry foana, dia toy izany koa ny sain'ity Ratsy Sinoa ity. Mety ho miadana sy maharitra izy ireo nefa mikatsaka ny hampitombo (hanatsara) ny sainy, ny vatany ary ny fanahin'izy ireo foana.
Conservative, conservative, conservative no Earth Rat! Tsy lazaina intsony hoe iza io Ratsy sinoa io no azo ampiharina, realista ary azo inoana fa matotra tamin'ny fahazazany. Raha ny marina, ny Earth Rat dia toa tsy zaza mihitsy - na dia nandritra ny fahazazany aza.
Ireo teraka tao amin'ny The Year of the Earth Rat dia manahy fatratra amin'ny fahitana sy ny hevitry ny besinimaro momba azy ireo ary, noho izany, mirona amin'ny famolavolana ny tenany ho skoto zazavavy sy zazalahy faralahy izy ireo.
Ireo biby sinoa ireo matetika dia manangona harena iray na roa nefa manao izany, miadana, miadana ary miadana tokoa.
Fifandraisan'ny Ratsy Zodiaka Shinoa
Ny fifandraisana amin'ny karazan'olona rehetra dia zava-dehibe amin'ny Ratsy Zodiac Rat Rat ary izy ireo dia olona mampihetsi-po tokoa izay manome voninahitra sy mankamamy ireo izay hajainy sy tiany.
Samy vehivavy mpikarakara tokantrano mahatalanjona ny Raty vavy sy ny lahy ka ny sakaizan'ny Ratsy sinoa dia azo tsaboina amin'ny tontolo mafana, milamina sy be fitiavana feno fofona manitra ary manandrana mitsabo tsara kokoa.
Satria manana fahatsiarovana mahatalanjona ilay Ratsy zodiak sinoa, dia azon'izy ireo antoka fa tsy ho adino izay lazain'izy ireo. Trinket kely tian'izy ireo saingy efa hadinon'izy ireo hatry ny ela, nanao sonia tao amin'ny banky fahatsiarovany ilay mpiara-miasa Ratsy Rat ary nividy herintaona taty aoriana ho fanomezana.
Ny Ratsy sinoa dia mifanentana indrindra amin'ilay Naga Sinoa sy ny rajako sinoa.
Zavamaniry Ratsy Sinoa & Fikambanana Metaphysical
Singa raikitra: Rano
Voninkazo: Daisy, Holly
Hazo: hazo terebinta
Isa: Nomery: 11
Twin Zodiac Andrefana: Sagittarius
Fifanarahana fitiavana tsara indrindra: Rajako sinoa , Dragona sinoa
Ratsin'ny olo-malaza sinoa: William Shakespeare, Leo Tolstoy, Lauren Bacall, Charlotte Bronte, Prince Charles, Doris Day, Hugh Grant, Sean Penn, Andrew Lloyd Webber
Zodiac sinoa ho an'ny ankizy: ny zaza voalavo
Mpanamboatra tany am-boalohany, ny zaza voalavo dia mamirapiratra, manangan-tena olona tia mifanerasera amin'ny hetsika sosialy. Manana fanomezam-pahasoavana manokana miaraka amin'ny teny voasoratra sy tononina izy ireo ary hasehony izany manomboka eo. Noho io antony io dia manome fanomezana lehibe ho an'ity zaza ity ny boky.
hitako foana ny isa 44
Raharaha lehibe ho an'ny zaza Rat Rat ny rariny. Tsy maintsy ataon'izy ireo antoka fa mitovy amin'ny pizza hafa mitovy habe amin'ny ankizy rehetra izy ireo. Tena be fitiavana, ny zaza voalavo dia manana fironana hanana ny fananany izay tiany ary mety ho tratry ny fialonana raha tsy tsapany fa mahazo fiheverana ampy izy ireo.
leo lehilahy tia vehivavy scorpio
inona no dikan'ny 4 amin'ny numerolojia
kanseran'ny lahy sy ny vavy sagittarius mifanentana